स्वास्थ्य जीवनशैली समाचार
देश संकटमा परेकाे बेला कहाँ छन् डा. गोविन्द केसी ? भन्छन्, 'अहिले बाेल्ने समय आएकाे छैन'
शेर भण्डारी डडेल्धुरा, २१ चैत
प्राध्यापक डा.गाेविन्द केसी नेपाली चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता हुन् । पटक-पटक चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्न भनी उनी अनसन बसे ।
उनी एक अर्थोपेडिक सर्जन हुन् । २६ वर्षसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अर्थोपेडिक प्राध्यापक एवम् विशेषज्ञका रूपमा काम गरेका उनले गत असोजमा अवकास पाएका थिए ।
बेलाबेलामा मेडिकल माफिया, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रकाे दुरावस्था, अवैध तथा अनियमित व्यवस्थाको विरोध तथा मेडिकल कलेज खोल्न माग गर्दै आएका उनी १७ पटकसम्म अनसन बसेका थिए ।
सरकारले अनसन तोडाउन पटक-पटक उनीसँग सम्झौतासमेत गर्‍याे । तर, अझै उनका माग पूरा भएकाे छैनन् । अहिले संसार कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)सँग लडिरहेको छ । नेपाल पनि कोरोनाबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।
अहिले देशमा कोरोनाको रोकथामका लागि लकडाउन जारी छ । यो समयमा धेरैले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डाक्टर केसीलाई सम्झिरहेका छन् ।
चीनबाट ल्याइएका मेडिकल सामग्रीमा घोटाला, निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्नु तथा उपचार गर्न अस्पताल अभावजस्ता समाचार अहिलेका हेडलाइन हुन् । यस्ताे बेला डा. केसीकाे सम्झना नआउने कुरै भएन । किनकि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको अव्यवस्था, अवैध तथा अनियमितताकाे विराेधमा उनी धेरै बाेलिसकेका छन् ।
डा. केसीले त्यतिबेला यी सबै कुराको माग गरेर सत्याग्रह बस्दा कतिपयले उनलाई ‘पागल’ को संज्ञासमेत दिएका थिए । १७औँ पटक सत्याग्रह बस्न गत कात्तिकमा डडेल्धुरा पुगेका बेला उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन, अर्बौंको ठगी गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई कारबाही र सुदूरपश्चिमको डोटी, डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजको माग राखेका थिए । तर, कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सीमा विवादका कारण उनको सत्याग्रह बीचमै रोकियो ।
१८ कात्तिकदेखि सुरू भएको उनको सत्याग्रह २६ कात्तिकमा नवाैँ दिनमा स्थगित भयो । राष्ट्रियताको विषयमा देशभर जनस्तरबाट आवाज उठेको भन्दै डा. केसी सत्याग्रह स्थगित गरेर काठमाडौं फिर्ता भएका थिए ।
सरकारसँग विभिन्न माग राखेर पटकपटक अनसन बस्दै आएका उनी अहिले कहाँ छन् ? विश्व नै कोभिड– १९ को महामारीबाट आक्रान्त भएकाे बेला नेपालमा पनि यसको त्रास छ । देशलाई अहिले थुप्रै चिकित्सकको आवश्यकता परेका बेला डा. केसी के गर्दै छन् ? आमनेपाली प्रश्न गरिरहेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत डा. केसी कता गए भनेर धेरैले प्रश्न तेर्स्याएका छन् ।
कहाँ छन् डा.केसी ?
हिजाेआज डा केसीको दिनचर्या बेग्लै छ । कीर्तिपुरको एउटा घरमा डा. केसीको कोठा छ । बिहान ६ बजे उठ्ने उनी ८ बजेअघि नै १ गिलास तातो दूध पिएर कोठाबाट निस्कन्छन् र लाग्छन् उनको सधैँको गन्तव्यतिर । करिब १० मिनेट हिँडेपछि उनी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छन्, डडेल्धुरा अस्पताल ।
किर्तिपुर बजार डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका–५ मा पर्छ । उनी डडेल्धुरा अस्पतालमै कार्यरत एक कार्यालय सहयोगीको घरमा बस्छन् । घरमा बसेबापत उनी दिनको ४ सय भाडा तिर्ने गर्छन् ।
के गर्दै छन् डडेल्धुरामा ?
अस्पतालमा पुगेपछि उनी सिधै बिरामी जाँच्न पुग्छन् । चाहे त्यो इमर्जेन्सी होस् वा वार्ड । बिरामीको खबर बुझेपछि उनी नयाँ बिरामीको उपचार गर्न र ती बिरामीलाई परामर्श दिनमै व्यस्त हुन्छन् ।
डडेल्धुरा अस्पतालका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद पन्तका अनुसार अस्पतालमा दैनिक ७० जनाभन्दा बढी हाडजोर्नीका बिरामी आउँछन् । ‘पहिले दिनको ७० भन्दा बढी हाडजोर्नीका बिरामी आउँथे तर लकडाउन भएकाले अहिले १२/१४ जना मात्रै आउँछन् , उनले भने ‘हामीसँग अर्थोपेडिकका १ अर्का डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ र डा. केसी दिनभर ती बिरामीलाई हेर्नुहुन्छ ।’
डा. केसी ब्रेक पनि लिँदैनन् । उनी दिनभर बिरामीको उपचारमै व्यस्त हुन्छन् । दिनमा १ छाक मात्र खाना खान्छन् ।
सोही अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार डा. केसी दिउँसो नेपालमा बनेको बिस्कुट, तातोपानी, कहिले कोकाकोला खाने गर्छन् । कामबाट फुर्सद नपाउने दिन त्यो पनि खाँदैनन्, भोकै बस्छन् । डा. केसीले शल्यक्रिया कक्षमा चाहिने सानातिना सामानसमेत आफ्नै रकमले किन्ने गरेका छन् ।
सरकारी अस्पताल, त्यसमा पनि प्रायः विपन्न परिवारका बिरामी आउँछन् ।
डा. केसीले गरिब बिरामीका लागि भनेर प्रतिजोडा ३५ सय पर्ने १५ जोडा वैशाखी किनेर अस्पतालमा राखेका छन् । दिउँसो अस्पतालको कामबाहेक केही नबोल्ने उनी बेलाबेला आफ्ना सबै बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी लिन्छन् ।
सुरुसुरुमा बिरामीले चिन्दैनन्
अस्पतालका कर्मचारीसँग नमस्तेबाहेक नबोल्ने उनलाई सुरूमा बिरामीले चिन्दैनन् । सोही अस्पतालका कर्मचारी प्रकाशचन्द्र बुढाऐर भन्छन्, ‘बिरामीले सुरूमा चिन्दैनन्, चिनेपछि उहाँलाई छोड्दैनन् ।’
दिनभर बिरामीलाई हेरेपछि साँझ ७ बजेतिर उनी कोठातर्फ लाग्छन् । घरबेटीले बनाएको खाना खाएर सुतेपछि उनको त्यो दिनको दिनचर्या समाप्त हुन्छ ।
२ महिना नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न भनेर डा. गाेविन्द केसी गत २० फागुनमा डडेल्धुरा आइपुगेका हुन् । डडेल्धुरा अस्पतालमा डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङ, दार्चुला र डोटीका हाडजोर्नीसम्बन्धी समस्या भएका धेरैले विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा पाएका छन् । लकडाउनअघिसम्म उनीसँग उपचार गराउन धेरैको भीड लाग्ने गरेको थियो । तर, हिजाेआज लकडाउनका कारण बिरामीको चाप केही कम भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
भेट्न गएका शुभचिन्तक र स्थानीयसँग खासै बोल्न नमान्ने डा. केसीकहाँ सञ्चारकर्मी पनि पटक-पटक पुग्ने गर्छन् । तर, उनी कसैसँग बोल्न मान्दैनन् । हामीसँग पनि उनले बोल्न मानेनन् । उनलाई केही बोल्न आग्रह गर्दा आफ्ना सहयाेगीमार्फत उनी एउटै सन्देश पठाउँछन्, ‘अहिले बोल्ने समय आएको छैन ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २१, २०७६, ०७:५०:००